Business Directory | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 2
ဆန်ဖရန်ဘေးဧရိယာမှာ Burma House စားသောက်ဆိုင် ဖွင့်ပြီ မိုးမခရွာဆော်ကြီး၊ ဇွန် ၁၄၊ ၂၀၁၄ မြန်မာများစုဝေးရာ ဖရီးမောင့်မြို့နဲ့ ဆီလွန်ကွန်တောင်ကြား အနီးက ဒေါက်တာမောင်မောင်သော် သွားဆေးခန်းနဲ့ ကပ်လျက် မြန်မာစားသောက်ဆိုင် တဆိုင် ဖွင့်ပါပြီ။ Burma House ပါတဲ့။ လိပ်စာကတော့ – 1810 Milmont Drive, Milpitas CA 95035 ဖြစ်ပါတယ်။ အားပေးနိုင်ကြပါပြီ။ ဖေ့စ်ဘွတ်လိပ်စာကတော့ – https://www.facebook.com/milpitasburmahouse Tags: ဆန်ဖရန် Related posts နွယ်ခွေ – မေတ္တာနန္ဒစာသင်ကျောင်းက အပြန် (MoeMaKa Interview)...
မြန်မာနဲ့ ထိုင်း ရိုးရာ စားဖွယ်စုံ – မှိုစားဖိုဆောင် ဖွင့်ပြီ မိုးမခရွာဆော်ကြီး၊ ဧပြီ ၅၊ ၂၀၁၄ ဆီလီကွန်တောင်ကြားမှာ မြန်မာနဲ့ ထိုင်းစားသောက်ဖွယ်ရာ စားသုံးနိုင်ဖို့ မြန်မာ-ထိုင်း ဇနီးမောင်နှံတို့က ‘မှို’ စားဖိုဆောင် – Moh Kitchen ကို ဖွင့်လှစ်လိုက်ပါပြီ။ 1244 S Abel St., Milpitas, CA 95035 . Phone (408) 262-3333 ဖြစ်ပါတယ်။ No tags for this post. Related posts No related posts.
မောင်ဝံသ၏ ဒေါင်းစာပေ နှစ် ၄၀ ပြည့် အခမ်းအနား ကျင်းပ မိုးမခဓာတ်ပုံသတင်း၊ စက်တင်ဘာ ၁၅၊ ၂၀၁၃ စက်တင်ဘာ ၁၄၊ နေ့ခင်းက၊ ရန်ကုန်မြို့၊ မင်းကွန်း တိပိဋိကကျောင်းတိုက်မှာ ကွယ်လွန်သူ စာရေးဆရာ သတင်းစာဆရာ မောင်ဝံသ ထူထောင်ခဲ့တဲ့ ဒေါင်းစာပေ (၁၉၇၃ – ၂၀၁၃) နှစ် ၄၀ ပြည့် အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနားကို ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာစာနယ်ဇင်းနယ်က ဧည့်သည်အများအပြား တက်ရောက်ကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ ကျန်ရစ်သူ မောင်ဝံသမိသားစုက သတင်းစာဆရာကြီး ဦးဝင်းတင်ရဲ့ ဦးဝင်းတင်ဖောင်ဒေးရှင်းကို မြန်မာငွေ ကျပ် ၅ သိန်း လှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်။ No tags for this post. Related posts No related posts.